बाटोमा यी ६ मध्य कुनै पनि एक चीज देखेमा भूलेर पनि छुनुहुँदैन , नत्र पछि पर्नसक्छ दरिद्रता - Daily Job
Main/Information/बाटोमा यी ६ मध्य कुनै पनि एक चीज देखेमा भूलेर पनि छुनुहुँदैन , नत्र पछि पर्नसक्छ दरिद्रता
बाटोमा हिडडुल गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमको चीज देखिन्छन् । यी चीजहरूमा केही अशुभ र नोक्सानदायक पनि हुन्छ । यहाँ ६ यस्ता चीज बताइएको छ, जसलाई बाटोमा देखेमा छुनुहुँदैन किन कि यसलाई अशुभ मानिन्छ । यी चीजलाई छुँदा दुर्भाग्यको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
विष्णु पुराणमा सुख-समृद्धि र पवित्रता बनाई राख्नको लागि विभिन्न प्रकारको नियम बताइएको छ । यी नियमहरूको पालना गरेमा भगवान विष्णु र महालक्ष्मीको साथै सबै देवी-देवताको कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ । विष्णु पुराणमा बताइएको छ कि बाटोमा हिडडुल गर्ने क्रममा कुन वस्तुहरूबाट टाढा रहनुपर्दछ, अन्यथा समस्या र दुखको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यी चीजहरूको कारण हाम्रो पवित्रता पनि नष्ट हुन्छ ।
१-कपाल – कतिपय अवस्थामा कुनै व्यक्तिको टुटेको कपाल बाटोमा देखिन्छ । कपाललाई अपवित्र मानिन्छ । बाटोमा देखिने कपालबाट टाढा भई दुरी पार गर्नुपर्दछ । यदि खानामा कपाल परेमा खाना अपवित्र हुने गर्छ ।
२-हड्डी – बाटोमा दुर्घटना भैरहेका हुन्छन् र यी दुर्घटनामा कयौँ पटक जनावरको मृत्यु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मरेको जीवहरूको अस्थी बाटोमा रहेको हुन्छ, त्यसबाट टाढा भई बाटो पार गर्नुपर्दछ । अस्थीको सम्पर्कमा आइसकेपछि स्नान गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । शास्त्रको अनुसार मृत जीवको सम्पर्कमा आइसकेपछि हामी अपवित्र हुन्छौँ । यसकारण कुनै शव यात्रामा समावेश भैसकेपछि तुरुन्त स्नान गर्न आवश्यक हुन्छ ।
३-स्नानको कारण फैलिएको पानी – यदि हामी कतै जाँदैछौँ र बाटोमा कुनै व्यक्तिले स्नान गरिसकेपछि फैलिएको पानी देखिएमा त्यस पानीबाट टाढा भई बाटो पार गर्नुपर्दछ । स्नान गरिसकेपछि फैलिएको पानी फोहोर र अपवित्र हुन्छ । यस पानीको सम्पर्कमा आउँदा हाम्रो पवित्रता नष्ट हुन्छ ।
४-खरानी – जब यज्ञ-हवन जस्ता पूजा कर्म पूर्ण हुन्छ भने यसबाट खरानी प्राप्त हुन्छ । यदि बाटोमा यस्ता खरानी देखिन्छ भने यसबाट पनि टाढा भई जानुपर्दछ । यज्ञ-हवनबाट प्राप्त खरानी पवित्र हुन्छ तर यदि यसमा खुट्टा लागेमा यसलाई अशुभ मानिन्छ ।
५-अपवित्र वस्तु – यदि बाटोमा कुनै पनि प्रकारको अपवित्र वस्तु देखिन्छ भने यसबाट टाढा रहेर बाटो पार गर्नुपर्दछ । पूजा र कुनै पनि विशेष काममा जाँदा पवित्रता रहिरहनु पर्दछ । यस कुरालाई विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ ।
व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थानमा नराख्नुहोस् यी ६ चिज, व्योहोर्नु पर्ला नोक्सानी
सावधान ! माछा खाँदै हुनुहुन्छ ? लासमा राखिने ‘फर्मलिन’ हालेर भारतबाट नेपालमा माछा
चिनियाँ व्यापारीले किलोमै ८ लाखसम्म घटाएपछि अर्ब मुल्य बराबरको र्यासागुम्बा अलपत्र